Propars Blog: Yonke into malunga E-commerce! | Propars E-Export
Propars Blog: Yonke into malunga E-commerce!
Yintoni uXanduva loMvelisi owomeleziweyo waseAmazon (EPR)?
I-Amazon, iqonga le-e-commerce likhulu kwihlabathi, ngaphambili libhengeze ukuba ngo-2022, abathengisi bayo baya kuphucula uxanduva lwabo malunga noXanduva loMvelisi oPhuculo (EPR). Ngokukodwa kwindawo yaseJamani naseFransi...
15 Matshi 2022
Ingxelo ye-E-Commerce yaseYurophu yowama-2021
Njengeqela le-Propar, sikuqulunqele okwenzekileyo kwimarike ye-e-commerce yaseYurophu ngo-2021, esisandula ukuyishiya ngasemva.
Indlela yokuthengisa kwamanye amazwe?
Ngehlabathi ledijithali kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwe-intanethi, ngoku kunokwenzeka ukuba ishishini ngalinye lithengise phesheya. Ukufikelela kubathengi abaninzi, ukuvavanya imveliso yayo ngokwemigaqo yeTL kunye neentengiso zotshintshiselwano lwangaphandle, kunye nokuvula iimarike ezintsha...
Yintoni i-Omnichannel kunye ne-Multichannel Marketing? Yeyiphi eFanelekileyo ngakumbi kwindawo yakho yokusebenza?
Nangona ukuthengiswa kwe-Omnichannel kunye ne-Multichannel ziguqulelwe kwisiTurkey njengentengiso yeetshaneli ezininzi, zinemiqathango eyahlukileyo. Ukuqonda umahluko phakathi kwezi ngcinga zimbini kwaye uziqhelanise nendawo yakho yokusebenza ngeyona ndlela ifanelekileyo yeyenkampani yakho...
11 Oktobha 2021
Ukufumana iMpumelelo kwintengiso yakho yeSilivere, iGolide kunye neDayimane yobucwebe kurhwebo lwe-E!
Emva kokufunda eli nqaku esikulungiselele lona, ​​uya kuba nalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukwenza ivenkile yakho yobucwebe be-intanethi, ulawule kwaye uthengise ubucwebe bakho besilivere, igolide kunye nedayimani. Kutheni kudidi lwezacholo...
IManyano yaseYurophu Imithetho ye-VAT (VAT) emitsha / Yintoni i-IOSS NE-OSS?
Ekupheleni kuka-2020, iKomishoni yaseYurophu yagqiba ekubeni ihlehlise imithetho emitsha ye-VAT (VAT), ekulindeleke ukuba iqalise ukusebenza nge-1 kaJanuwari ukuya ku-19 kaJulayi, 1 ngenxa yobhubhani we-Covid-2021. Amazwe, aneCorona...
23 kweyeSilimela 2021
Indlela yokuthengisa kwiPlatform yokunqwenela?
Izihloko esizigubungelayo kwiposti yethu yebhlog, apho sikuxelela into ekufuneka uyazi ukuze uthengise kwiqonga le-Wish, enye yeemarike ezinkulu zehlabathi ze-e-commerce ukusuka e-USA ukuya eYurophu; Yintoni Wish? nqwenela...
15 kweyeSilimela 2021
I-Amazon Prime Day: Iingcebiso zabathengisi
Zimbalwa iintsuku ezishiyekileyo kumnyhadala woSuku lweNkulumbuso yaseAmazon, obanjwa minyaka le kwihlabathi liphela kwaye uqhubeke kangangeentsuku ezimbini. Kumaphulo azakubanjwa ngomhla wama-21-22 kweyeSilimela kulo nyaka, iNkulumbuso...
8 kweyeSilimela 2021
Uyithumela njani i-E eMexico?
Izihloko esixubushe ngazo kwiposi yethu yeblogi, esiyilungiselele ukuba sisebenze njengemephu yendlela kulabo bafuna ukuthumela ngaphandle eMexico, ebambe impumelelo yeMelika kunye neCanada kwi-e-commerce; IVolumu ye-E-commerce yaseMexico Ngoyena mkhulu eMexico...
4 kweyeSilimela 2021
I-Ebay kuvunyelwene ngayo nePayoneer njengeNdlela yokuhlawula!
Iindaba ezimnandi kubathengisi! Ingxaki ye-PayPal yanyamalala e-Ebay, enye yamaqonga aphambili emhlabeni. Ngenxa yokongezwa kwePayoneer kwiinketho zayo zokuhlawula, i-ebay yongeze iPayoneer kwiakhawunti yakho yomthengisi.
Yonke into oyifunayo nge-E-Commerce!
Iindlela zoRhwebo lwe-E 1
Uhlalutyo lweCandelo 1
Iindawo zentengiso 5
Uhlalutyo lwelizwe 3
Ukunika izimvo ukutya
Copyright © Propars Blog: Yonke into malunga E-commerce!. 2022 • Onke amalungelo agciniwe.
Umxholo weKoala WordPress by EckoThemes. Ipapashwe nge WordPress.